Xaaladda Dhuusamareeb oo deggan & Khasaarihii dagaalkii shalay oo sii kordhaya. – Radio Daljir
Xaaladda Dhuusamareeb oo deggan & Khasaarihii dagaalkii shalay oo sii kordhaya.
Janaayo 2, 2010 12:00 b 0
Dhuusamareeb, Jan 03 – Xaaladda magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa saaka deggan kadib markii maalintii shalay ahayd uu halkaasi ka dhacay dagaal aad u xooggan oo dhaxeeyey ciidamada Xarakada Al-shabaab iyo kuwa culimo aw-diinka Ahlu sunna Waljameeca.
Magaalada oo ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada culimo aw-diin Ahlu sunna Waljameeca ayaa laga dareemayaa xaalad degnaansho inkastoo dadkii shacabka ahaa ay dhammaantood iskaga carareen magaalada kadib markii shalay ay dagaalladu bilawdeen.
Goobaha ganacsiga ee magaalada ayaa badankoodu xiran, waxaa magaalada dhaxdeeda lagu arkayaa ciidamado aad u tira badan iyo gaadiidka dagaalka oo gaaf-wareegaya magaalada iyo dhinacyadeeda sida ay idaacadda Daljir u sheegeen dadka magaalada Dhuusomareeb.
Dagaalkii shalay oo ahaa mid u dhaxeeyey ciidamada Xarakada Al-shabaab iyo kuwa culimo aw-diinka Ahlu sunna Waljameeca, ayaa gaystay khasaroorin dhimasho iyo dhaawacba iskugu, waxaana la xaqiijinayaa dadka dhintay in ay gaarayaan illaa 25 qof halka dhaawucuna uu kor u dhaafayo 80 qof.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la tilmaamayaa in ay iskugu jiraan labadii dhinac ee dirirtu dhaxmartay iyo dad shacab ah oo ay haleeshay rasaastii labada ciidan ay is weydaarsanayeen, waxaana dhaawacyadii la kala geeyey degmooyinka ka tirsan isla gobolka Galgaduud.
Magaalooyinka Guriceel iyo Ceelbuur oo ka wada tirsan gobolka Galgaduud ayaa ka mid ah meelaha loo daad-gureeyey dadkii wax ku noqday dagaalkii shalay ka dhacay Dhuusomareeb, waxaana saraakiisha caafimaadka ee degmada Guriceel ay noo sheegeen in la soo gaarsiiyey dad ka badan 30 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan.
Dagaalka shalay ka dhacay magaalada Dhuusomareeb oo ahaa dagaal aad u xooggan ayaa bilawday aroortii hore ee subaxnimadii Sabtida, iyadoo labadii dhinac ee dagaallamay ay iskugu galab dhacsaday, waxaana haatan magaalada laga dareemayaa raadadkii dagaalku uu reebay, iyadoo guryaha iyo goobaha kalaba lagu arkayo burburkii rasaastu ay u gaysteen.
Galinkii hore ee shalay waxaa si rasmi ah magaalada u haystay ciidamada Xarakada Al-shabaab oo gabi ahaanteedaba la wareegay, hase ahaatee gabal-gaabkii ayaa mar kale magaaladu gacanta u gashay ciidamada culimo aw-diinka Alhu sunna Waljameeca.
Lama oga xaaladdu sida ay ku danbayn doonta, waxaana abaabul colaadeed laga dareemayaa deegaannada ay ka kala taliyaan Al-shabaab iyo Ahlu Sunna, kaasi oo ka dhan ah magaalada Dhuusomareeb ee shalay oo dagaalku uu ka dhacay.
Shir uu ka qaybgalay M/weyne ku xigeenka Puntland oo ka dhacay Bossaso.
?Puntland oo soo bandhigtay kooxo burcad badeed iyo tahriibayaal ah oo lagu qabtay xeebta Ceelaayo.